ရွှေဖြူးလေး: June 2012
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 8:28 PM2comments:
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ သည် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် လေးအသင်္ချေ နှင့်တစ်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ၊ရှစ်အသင်္ချေ နှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဆယ်ခြောက့်သင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ပါရမီတို့ ကို ဖြည့်တော်မူခဲ့ရ၏ ။ ဘုရားဖြစ်တော်မူမည့် နောက်ဆုံးဘဝထိတိုင်အောင် စင်္ကြာဝတေးမင်း
စည်းစိမ်းကို ပင် လျစ်လျုရှူ၍ များစွားသော သားမယားမောင်းမမိဿံချွေရံသင်းပင် စည်းစိမ်းဥစ္စာတို့ ကိုစွန်လွတ် ၍ တောထွက်တော်မူခဲ့၏ ။ဒုက္ကရ စရိယာကျင့်ရ၏ ။ပြီးမှ မစ္ဇျိမပဋိပဒါ အကျင့်ဖြင့်
ကိုယ်တိုင်မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုတော်မူရပေသည် ။ ထိုသို မျက်မှောက်ပြုပြီးသည်နှင့် တစ်ဆက်တည်း သဗ္ဗညုတညဏ်အစရှိသော ညဏ်တော်များကိုရ ၍ သဗ္ဗညုတဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူလေသည် ။
ဗုဒ္ဓသည် ဇနက မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သည် ဇည
ဗုဒ္ဓ၏ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သသည် မိမိကိုယ်တိုင်၏ဝီရိယ ညဏ်စွမ်းကြောင့်ရ၏ ။ဗုဒ္ဓသည်ဇနက ဖြစ်စေသူ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သည် ဇညဖြစ်စေအပ်သောအရာဟု ပရိယယယ်အားဖြင့် သုံးနှုန်းပြောဆိုခွင့်ရှိ၏ ။တနည်းအားဖြင့်လည်း ဗုဒ္ဓသည် ပဓာနပုဂ္ဂိုလ် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သည် အပဓာနအပိုင်းဟု ဆိုနိုင်၏ ။
ဗုဒ္ဓသည် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ထက် မြတ်သည်
ထိုကြောင့် ဇနက ပဓာနပိုင်ရှင်ဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဇည၊ အပဓာနပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သော မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သည် ပရိယာယ်အားဖြင့်ဆိုခွင့်ရှိပါသည် ။
မဂ္ဂါနဋ္ဌင်္ဂိကော သေဋ္ဌော၊ သစ္စာနံ စတုရော ပဒါ။
၀ိရာဂေါ သေဋ္ဌော ဓမ္မာနံ၊ ဒွိပဒါနဉ္စ စက္ခုမာ။ (ဓမ္မပဒ၊ ပါ ၊ဂါထာ ၂၇၃)
ပကတိလမ်းခရီး၊၆၂ ပါးသော မိစ္ဆာဒိဌိတည်းဟူသောအပါယ်သံသရာခရီးလမ်းတို့ ထက် အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော မဂ်လမ်းခရီးသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ ဝစီသစ္စာ သမုတိသစ္စာ၊ပရမတ္ထသစ္စာအားလုံးတို့ ထက်၊ အရိယသစ္စာလေးပါးသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ သင်္ခတအသင်္ခတသဘောတရားအားလုံးတို့တွင် ရာဂကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊ တရားအားလုံးတို့ ထက်၎င်း၊သတ္တဝါအားလုံးတို့ ထက်၎င်း အခြေနှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တ၀ါအားလုံးတို့တွင် မျက်စိငါးပါးရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ဟုဟောတော်မူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ထက်မြတ်၏ဟူ၍ ဓမ္မပဒ၊အဌကထာနှင့်အဘိဓာန်ဋီကာ ဗုဒ္ဓပရိယာအဖွင့်၌ ဆိုတော်မူသည် ။
မြတ်စွာဘုရားသည် တရားတော်ကို အမြဲမှီဝဲပွားများသော ဘာဝနာသေဝန၏အစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည် တရားတော်ကိုပူဇော်၏ ။တခါတစ်ရံ သုတ္တန်ပါဠိတော်များကိုပင် နာယူတော်မူ၏ ။ဖလသမာပတ် နိရောဓသမာပတ်တို့ ကို အမြဲ ဝင်စားတော်မူ၏ ။`ဤအရာ၌ တရားတော်ကို အလေးဂရုပြုခြင်း အရိုသေပြုခြင်းမြတ်နိုးတော်မူခြင်းတို့ ကိုပင် ပူဇော်ခြင်းဟု ဆိုပေသည် ။
ယော ခေါ ဝက္ကလိ ဓမ္မံ ပဿတိ၊ သောမံ ပဿသိ။ စသည်...
တရားကိုမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကိုမြင်၏ ၊ဖူး၏ ၊ပူဇော်၏။အလေးမြတ်ပြု၏ ဟု ဟောတော်မူ၏ ။ထိုပြင်မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်တော်တွင် အရှင်အာနန္ဒာအား ဤသိုဟောတော်မူ၏ ။
ယောဝေါ အာနန္ဒ၊ မယာဓမ္မောစ ဝိနယောစ။
ချစ်သားအာနန္ဒ ငါဘုရားရှင်သည် သုတ် အဘိဓမ္မာတရားကိုလည်း ဟောကြားထားပြီးပြီ ။ဝိနည်းတရားကိုလည်း ပညတ်ထားပြီးပြီ ။ထိုသုတ်အဘိဓမ္မာ ဝိနည်းတရားတော်သည် ငါဘုရားပရိနဗ္ဗာန်စံပြီးသည်နောက် သင်တို့ ၏ ဆရာ(ဘုရား)ဖြစ်ရစ်လိမ်မည် ။ဤတွင် ပရိယတ်တရားတော်းများကို မိမိကိုယ်စားအဖြစ်မိန့် တော်မူပါသည် ။၎င်းပဠိတော်စကားမြတ်တို့ ကို ထောက်ရှူပါက ဘုရားရှင်သည် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် တရားထက်မြတ်သည် ။မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သည်ဘုရားထက်မြတ်သည်ဟု မဆိုသာ ။ထပ်တူ ထားရမည့်ကဲ့သို ရှိလေသည် ။ဤသို့ လျှင်ပြဆိုခဲ့သည်နည်းအတိုင်း ပရိယာယ်အားဖြင့် မြတ်စွားဘုရားသည် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် တရားထက်မြတ်သည်ဟု ဆိုသင့်သည်ထင်ပါသည်။ (စာကိုးx မုံရွှာမြို့အရှေ့လည်တီတိုက် ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘုရား၏ မဟာသုတဒီပနီကျမ်း)
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 8:40 AM 1 comment:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 9:47 AM No comments:
(၁)ကံ = နောက်ဘဝမှာ ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးတော့မည့် ရှေးတုန်းက ပြုခဲ့သော
(မသေမီ ယခုဘဝတွင် ပြုခဲ့သော ကံများလည်း ဖြစ်နိုင်၏) ကုသိုလ်ကံ, အကုသိုလ်ကံ။
(၂)ကမ္မနိမိတ် = ကံပြုစဉ် တွေ့ကြုံရသော အာရုံခြောက်ပါး။
(ဥပမာ – ကျောင်းဆောက်ရာ၌ သင်္ကန်းအလှူ, ဆွမ်းအလှူ စသည်)တို့ထင်ပေါ်တတ်၏။
(၃)ဂတိနိမိတ် = အနာဂတ်ရောက်ရမယ့်ဘဝ တွေ့ကြံရလတံ့သော အာရုံ။
(ဥပမာ – အမိဝမ်းရေ၊ ငရဲဘုံ), “ထိုရောက်မည့်အရပ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားရမည့် အရာများ”
(ဥပမာ – လင်းတ၊ ခွေး၊ ငရဲမီး၊ ငရဲထိန်း၊ နတ်သား၊ နတ်သမီး)ပေါ်တတ်၏။
ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးတော့မည့် ကံ ၊ ကံမ္မနိမိတ် နှင်. ဂတိနမိတ် တို.သည် မသေမီ ဘ၀မှ မဟုတ်ဘဲ
ရှေးရှေးဘ၀များစွာက လည်း ကံ ၊ ကံမ္မနိမိတ် နှင်. ဂတိနမိတ် တို.လည်း ဖြစ်နိူင်ပါသည်။
(အကျယ်ကို ကံမ္မဖလသုတ်တော်တွင် ဖတ်ရှုနိူင်သည်)
ထိုသို.တစ်ဘ၀၏ နောက်ဆုံးစိတ်(စုတိစိတ်)ဖြစ်ပြီးနောက် အခြားမရှိ နောက်ဘ၀တွင် ပဋိသန္ဓေစိတ် ဖြစ်သည်။
သေခြင်းနှင်.ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ များ အထူးသိရန် ဒိဋ္ဌိ နှစ်ပါးကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“ရှေးဘဝက အတ္တဖြစ်သော ရုပ် သို့မဟုတ် နာမ်သည်ပင် ဘဝသစ်၌ ဆက်လက်ပါလာ၏”
ဟု ယူလျှင် “သတ္တဝါသည် မပြတ်မစဲ မြဲ၏”ဟု ယူသော သဿတအယူဘက်သို့ ပါဝင်၏။
“ရှေးဘဝက အတ္တဖြစ်သော ရုပ်နာမ်ဟူသမျှနှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ် မရှိ ပြတ်၏”ဟု ယူလျှင်
ထိုဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးမှ ကင်းလွတ်ဖို့ရာ “ရှေးဘဝက အကြောင်းနှင့်လည်း မကင်းတတ်၊
တိုက်ရိုက်ပါလာခြင်းလည်း မရှိ” ဟုသာ ယူရာ၏။
ဘဝသစ်၌ ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်သည် ဘဝဟောင်းက ရုပ်နာမ်များ တိုက်ရိုက် ပြောင်းရွှေ့လာခြင်း
မဟုတ်။ ဘဝဟောင်းက အကြောင်းများနှင့်လည်း မကင်းနိုင်။
တောင်အနီး၌ ဟစ်အော်သော အသံသည် တောင်နံရံကို တိုက်ခိုက်မိသောအခါ ‘ပဲ့တင်သံ’
ပြန်ထွက်လာသကဲ့သို့တည်း။ပဲ့တင်သံသည် မူလအော်သံလည်း မဟုတ်။ မူလအော်သံနှင့်
ထို့အတူ ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်သည် ဘဝဟောင်းက ရုပ်နာမ်အဆက်လည်း မဟုတ်၊
ဘဝဟောင်းက အဝိဇ္ဇာ တဏှာ သင်္ခါရ အကြောင်းများနှင့်လည်း မကင်းနိုင်။
ဆီမီးတစ်ခုမှ ဆီမီးကူးညှိရာ၌ ဒုတိယမီးသည် ပထမဆီမီး၏ အဆက်လည်း မဟုတ်၊
တံဆိပ်နှိပ်ရာ၌ တံဆိပ်ရာသည် မူလတံဆိပ်၏ အဆက်လည်း မဟုတ်၊
မူလတံဆိပ်နှင့်လည်း မကင်းနိုင်ပုံကို ဥပမာဆောင်၍ ပြကြသည်။
ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲ ကြပါစေ ရွှေဖြူးလေး
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 5:57 PM No comments:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 5:13 AM 1 comment:
ငါသိအပ်သော ဤတရားကားနက်နဲ၏။ မြင်နိုင်ခဲ၏။ မွန်မြတ်၏။ တက္ကီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကျက်စားရာ မဟုတ်။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 9:24 PM No comments:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 1:52 AM 1 comment:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 7:35 PM No comments:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 8:46 PM No comments:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 4:55 AM No comments: